Alison Moritsugu dia mampiseho amintsika ny vatan-kazo voaloko | Famoronana an-tserasera
Ity sanganasa kanto na famoronana ity dia milalao zavatra tena ilaina toy ny fampiasana ny iray hazo voapaika amin'ny hazo maina hampitana ny tontolo maitso izay mety ho ampahany amin'ilay ala maitso nolokoina ilay hazo.
Ny iray amin'ireo toetra miasa amin'ny sisin'ny hazo hazo dia ny fomba fisokafany, manome lalana azy ireo indentation mamela anao hamorona vokatra somary hafahafa sy manokana toy ny hoe ny fisokafan'ny hazo mihitsy no nandray anjara tamin'ny famolavolana azy. Sehatra nolokoin'ny mpanakanto Alison Moritsugu ary mitondra antsika any amin'ny habaka hafa ahafahantsika mahita ireo sary hafa ahafahantsika maneho ny hevitsika raha manana ny fahaizan'ny hoso-doko isika.
Miaraka amin'ny fahatsapana maizina kely hampiasa ny iray amin'ireny hazo nianjera hamerina ny hatsarana ny tontolo izay misy ireo hazo ireo no tena mpiorina an'io zava-maitso io ary io natiora io amin'ny hakantony manokana, io lamba vita amin'ny hazo io dia sanganasa famoronana hanasongadinana.
Ilay paradisa an-tany izay mahatadidy izany fomba sary izany ny vanim-potoanan'ny romantisme izay nitaoman'ilay flora alokaloka maitso manaitra kokoa, fa kosa mitady an'io dikany amin'ny zavatra tsy takatry ny saintsika io raha ny tena izy dia manana an'io eo imasontsika isika.
Ilay mpanakanto mihitsy: «Ao amin'ny sary hosodoko amin'ny hazo, mandinika ny sary moso-doko nolokoina tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Ireo zaridaina ireo, nataon'ny mpanakanto toa an'i Albert Bierstadt sy Frederic Edwin Church, dia niorim-paka lalina tamin'ny fananganana politika tamin'ny androny, nasehon'izy ireo ny Tany ho toy ny Edena mety hitranga. Esoriko ivelan'ny tontolon'ny fianakaviany ireo sary ireo ary hosodoko mivantana amin'ny vatan-kazo miaraka amin'ny hodiny. Ny fahatsapana ny tsy fahitana na fankalazana dia voahodidin'ny porofon'ny faharavana.»
Anananao ny azy tranonkala ary a fampirantiana mampiseho ny asanao tsy ho ela ao New York.
Amin'ny hazo no anaovantsika ny asa amin'ny sokitra Peter demetz.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Landscape nolokoana tamin'ny hazo i Alison Moritsugu
Famolavolana sary Aitor Hernández dia hoy izy:
Mamaly an'i Aitor Hernández Graphic Design
Jorge Maldonado dia hoy izy:
Tena tsara ny mandoko volom-borona fa tiako ity kanto ity; Inona no loko ampiasainao? Te hampihatra azy aho
Valiny tamin'i Jorge Maldonado
Ny endritsoratra amin'ny herinandro, endritsoratra calligraphy